HomeWararka Ciyaaraha MaantaKooxaha Chelsea iyo PSG oo u soo gudbay Semi-finalka Koobka Champions League
April 14, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Champions League, Falanqeynta Kulamada 0
labada koox ee PSG iyo Chelsea ayaa iska xaadiriyay Semi-finalka Koobka Champions league iyadoo kulankan ay la kulmeen guuldaro.
Chelsea ayaa guul-darro 1-0 ah kala kulantay kooxda reer Portugal ee FC Porto, laakiin kulankii hore oo ay Blues ku badisay 2-0 ayaa ka caawisay in ay iska xaadiriyaan semi-finalka.
Xidiga Mehdi Taremi ayaa dhamaadka ciyaarta daqiiqadii 90+4aad ee ciyaarta u dhaliya goolka kaliya ee kulankan.
Paris Saint-Germain 0 – 1 Bayern Munich
PSG ayaa iyaduna kusoo baxday celceliska goolashii ay ku dhalisay ciyaartii lugtii hore, waxaanay usoo gudubtay semi-finalka sannadkii labaad oo xidhiidh ah, iyadoo reebtay kooxdii koobka ka qaadday sannadkii hore.
Kooxda reer France ayaa lagaga badiyey 1-0 kulan uu fursado badan khasaariyey Neymar, sidoo kalena ay Bayern iska lumisay fursado badan dhamaadkii ciyaarta, goolka kaliya ee Bayern Munich waxaa u dhaliyay Eric Maxim Choupo-Moting qeybta hore daqiiqadii 40aad
waxaana natiijada labada kooxood ee cel-celiska labada kulan ay ku dhamaadeen 3-3, hase yeeshee PSG oo garoonka martida kusoo dhalisay saddex gool ayaa u gudubtay wareegga xiga.